Toamasina : ahina hifandona ny polisy sy ny zandary | NewsMada
Toamasina : ahina hifandona ny polisy sy ny zandary
Ahina ny hisian’ny fifandonana eo amin’ny zandary sy ny polisy ao Toamasina. Polisy iray mpiambina manokana ny lehiben’ny faritra Atsinanana izay niharan’ny daroka nataon’ny zandary no pitik’afo niantombohan’ity raharaha ity…
Niharan’ny herisetra nataon’ny zandary ao amin’ny vondron-tobim-paritry ny zandarimariam-pirenena ao Toamasina, afakomaly alina, ny polisy iray mpiambina manokana ny lehiben’ny faritra Atsinanana. Araka ny fampitam-baovao voaray momba ity raharaha ity, amin’ny maha mpiambina olona ambony azy, izay fotoana hodian’ny olona ambenany vao afaka mamonjy fodiana izy. Efa alimbe izy vao tafody ny alakamisy alina teo rehefa avy nanatitra ny lehiben’ny faritra Atsinanana tany an-tranony. Nandeha moto nihazo ny lalam-pasika izy tamin’io fotoana io hamonjy fodiana ao amin’ny fokontany Andranomadio 11/43. Nifanehatra tamin’ny zandary nanao fisafoana izy teny an-dalana hamonjy fodiana ka nasain’izy ireo nijanona. Nilaza izy fa nanaraka tsara ny baikon’ireo zandary nampijanona azy. Nampiseho ny karatra maha polisy sy nilaza ny maha mpiambina ny lehiben’ny faritra Atsinanana izy nandritra ny fifampiresahana tamin’ireo zandary. Namerina ny karatra tany am-paosiny ka nasain’ireo zandary niankohoka tamin’ny tany. Tsy vitan’izay fa mbola nosavaina koa ny motony ka hita tao anaty moto ny basiny. “Amin’ny maha mpiambina olona ambony azy, zony ny mitondra ny basiny mody any an-tranony. Mbola niharan’ny antsonjay maro isan-karazany koa ny polisinay na efa nanazava ny marina rehetra aza. Iza no tsy mahalala azy fa hoe mpiambina ny lehiben’ny faritra”, hoy ny talem-paritry ny filaminana anatiny, ny kaomisera Rakototiana Laubel Valisoa.
“Saika hitifitra ilay polisy”, hoy ny zandary…
Na teo aza izany, nisy ny fanadihadiana manokana nataon’ny polisy teny anivon’ny fokontany momba ity polisy ity sao nisy hamamoana. “Raha voaporofo fa nisy ny hamamoana, tsy maintsy misy ny fepetra horaisina satria tsy azo ekena ny polisy mitondra basy kanefa handray zava-pisotro mahamamo kanefa tsy voaporofo izany”, hoy hatrany izy.
Ahina, araka izany, ny hisian’ny fifandonana eo amin’ny zandary sy ny polisy noho ity raharaha ity satria manizingizina ireo zandary fa hoe saika haka basy hitifitra ireo zandary nanao fisafoana ity polisy ity tamin’io fotoana io. “Noho ny fahafantaran’ny zandary fa hoe mpiambina ny lehiben’ny faritra sy amin’ny maha polisy azy mihitsy no nahatonga ny antsonjay”, hoy ny lehiben’ny arofenitra eo anivon’ny faritra Atsinanana, Razafinjoelina Lanto.
Isan’ny faritra mena amin’ny tsy fandriampahalemana ny ao Toamasina, ny andro rahateo alina ka andraikitr’ireo mpitandro filaminana ny mandamina ity raharaha ity mba hiitatra raharaha hafa.
Andrasana ny tohin’ity raharaha ity, saingy mandra-piandry izany, hanao ahoana koa ny raharaha mampifanjevo ny Tim sy ny Emmo/Reg etsy Mahamasina, anio.
Sajo sy Randria